Ny endrika mainty Blackmagic dia hampiseho mpamadika vaovao indrindra any amin'ny NAB Show New York - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcaster ofisialy an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » Ny endrika mainty Blackmagic dia hampiseho ny mpamadika vaovao indrindra amin'ny NAB Show New York
Ny endrika mainty Blackmagic dia hampiseho ny mpamadika vaovao indrindra amin'ny NAB Show New York
Tamin'ny volana oktobra nanodidina ny zorony. Kat Show New York dia miomana ho hetsika mahaliana ho an'ireo matihanina teknolojia sy haino aman-jery manatrika. Blackmagic Design Fantatra noho ny famoronana vokatra avo lenta ambony indrindra, mpanitsy loko, fakan-tsary dizitaly, mpanova horonan-tsary, mpanara-maso horonan-tsary, mpanova famokarana mivantana, mpamoaka kapila, lalana, mpanara-maso onjam-peo ary mpanaovana horonantsary tena izy ho an'ny horonantsary fampisehoana, famoahana famokarana ary indostrian'ny fahitalavitra. Amin'ny Oktobra ho avy izao, hanasongadin'izy ireo ny vaovao mihetsika, ny ATEM Constellation 8K at Kat Show New York.
Ny ATEM Constellation 8K dia Ultra HD mpanamory famokarana mivantana miaraka amin'ny 4 M / Es, 40 x 12G ‑ SDI inputs, 24 x 12G ‑ SDI aux output, 4 DVEs, 16 Keyers, 4 media, 4 multiviewers, 2 SuperSource ary fenitra fiovam-po amin'ny famoahana SDI rehetra. Ny fampifangaroana ireo endri-javatra ireo dia manohana ny fiasan'ny mpanodina 8K tena mahery rehefa miverina amin'ny 8K. Ny ATEM Constellation 8K dia manana resadresaka vita an-tsoratra ary fantsona 156 matihanina Afangaro amin'ny feo audio miaraka amin'ny EQ sy ny dynamics, izay ahafahan'ny mpampiasa iray mifandray sy mampiasa audio Fairlight feno. Ho fanampin'ny maha mpamadika 8K azy dia ny fanavaozana ATEM Constellation 8K dia manatsara ihany koa ATEM Television Studio.
Ny ATEM Constellation 8K dia manana Multiview ary azo ampiasaina ho an'ny hetsika mivantana
Tsy misy atidoha milaza fa ny fomba haingana indrindra hamokarana programa dia amin'ny alàlan'ny hetsika mivantana, ary ny ATEM Constellation 8K ihany no mahatonga izany mety ho zava-misy. Ny atrikasa marobe ATEM Constellation 8K dia mamela azy io hampiasaina amin'ny fampisehoana an-kira, festival music ary hetsika ara-panatanjahantena. Ity fampidirana marobe sy DVE efatra ity dia mety hahazo tombony mivantana amin'ny fanatanjahan-tena mivantana izay ahafahana mamorona fitambaran-damba maro be hananganana ny hetsika.
ATEM Constellation dia lehibe, ary ny azy HD ary Ultra HD azo atambatra hiasa ny mpamadika 8K. Ity fampifangaroana ity dia manome ny mpampiasa ny herin'ny 40 mahaleo 12G input SDI ampidirina rehefa miara-miasa amin'ny HD or Ultra HD. Na dia niova ho 8K aza, ireo fampidirana 40 ireo dia afaka miova ho 10 Quad Link 12G ‑ SDI 8K ampidirina miaraka amin'ny fiovam-po sy hiovana cross. Midika izany fa ny mpampiasa iray dia afaka mifindra amin'ny 720p, 1080p, 1080i, Ultra HD ary ny fenitra horonantsary 8K haingana. Ny mpampiasa dia afaka mandray ihany koa 4 mahaleo tena Ultra HD multiviews miaraka amin'ny fahaizana miova fo ho 8K feno multiview. Na ny fanalahidy, DVE, Super Source ary hidin-midina midina aza dia afaka mifindra amin'ny 8K teratany!
Ny fananana multiview 8K namboarina ao amin'ny ATEM Constellation dia ahafahan'ny mpampiasa manara-maso loharanom-baovao marobe miaraka amin'ny famoahana multiview tsy miankina 4 izay azo atao manokana sy manova ho multiview feno 8K feno rehefa mamadika ny 8K. Ny fampidirana ivelany sy ny loharano anatiny rehetra dia azo ampiharina amin'ny fomba fijery rehetra ary ny multiviews tsirairay dia azo atokana ho an'ny tsy miankina 4, 7, 10, 13 na 16 miaraka. Ny fijerena tsirairay dia manana sata eo amin'ny efijery ao anatin'izany misy marika manokana, V metatra ary tally. Ny efatra 12G ‑ SDI multiview support dia manohana HD ary Ultra HD hatramin'ny 2160p60, ary hatramin'ny 4320p60 amin'ny Quad Link 12G ‑ SDI rehefa navadika tamin'ny 8K.
ATEM Constellation 8 K Mampitombo ny tanjaky ny fampielezam-peo mandroso
Ny famoronana ATN Constellation 8K compact 2RU rack mount dia mamela ny fampandehanana ny mpanodina ho fampiasa maika, ary tafiditra ao dia ny LCD lehibe izay mamela ny mpampiasa hahita ny famoahana programa ary manova ny filaharana mpanova amin'ny alàlan'ny menus amin'ny efijery. Ny ao ambadiky ny mpanodina dia manana 40 x 12G ‑ SDI ampidirina, 24 x 12G ‑ SDI aux outputs, miampy am-peo, Ethernet, RS ‑ 422 ary MADI audio nomerika fampidirana fanampiny amin'ny mpangaro audio Fairlight anatiny na dia 2RU aza habeny.
Manome Transition matetika ny ATEM
ATEM Constellation 8K dia misy ny fifindra-monina teratany 8K kalitao avoakan'ny kalitao izay azo namboarina amin'ny fanitsiana ny tarehimarika toy ny faharetany, ny lokon'ny sisintany, ny sisiny, ny toerany ary ny lalana arahiny. Ireo tetezamita ireo dia:
Transitions feno 8K teratany ary ny mpampiasa iray koa dia afaka mahazo tetezamita DVE mahavariana, izay tonga lafatra amin'ny famafana sary ary na dia fanitsakitsahana aza rehefa ampiasaina miaraka amin'ireo mpilalao media anatiny. Mba hamongorana ireo lesoka, ny ATEM Constellation 8K dia manana endrika fiovana mialoha izay manome fahafahan'ny mpampiasa ny fizahana ny fandehanana alohan'ny hametrahana azy eny amin'ny rivotra!
Blackmagic DesignNy ATEM Constellation 8K no mpanaovana famokarana mivantana natelin'ny famokarana audio matihanina. Azo ampifandraisina amin'ny console faran'izay mifangaro tsara izy io, ary afaka ampiasaina koa izy io mba hampifangaro audio amin'ny alàlan'ny fampidirana mikrokarimihetsika an-tserasera ampiasaina amin'ny feo avo.
Kat Show New York no fivoriana tonga lafatra amin'ny matihanina amin'ny haino aman-jery, fialamboly ary teknolojia. Amin'ny Oktobra 16-17, 2019 no hotanterahina izany. The Blackmagic Design ny fampirantiana dia hatao ao amin'ny trano heva N403.
To register for Kat Show New York, araka izany kitiho eto ary hianatra bebe kokoa momba ATEM constellation 8k, dia jereo www.blackmagicdesign.com.
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News 2019 ATEM Constellation ATEM Constellation 8K Blackmagic Design Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine fampitana injeniera fampitana Engineering Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana Multiview Kat Kat 2015 Kat 2016 Kat Show New York NAB16 nabshow	2019-09-30
Previous: Calrec dia manohy fitroarana ho an'ny fifandraisana IP marina amin'ny fametrahana ny fitsapana an-tserasera JT-NM farany
Next: Studio mikarokaroka mikaroka tokana tsy miankina